Raad Raac News Online – Madaxweyne Farmaajo oo sagootiyay Cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka oo u ambabaxayey howlgallo ka dhan ah Al-shabaab.
Madaxweyne Farmaajo oo sagootiyay Cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka oo u ambabaxayey howlgallo ka dhan ah Al-shabaab.
Somalia October 25, 2017 Comments Off on Madaxweyne Farmaajo oo sagootiyay Cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka oo u ambabaxayey howlgallo ka dhan ah Al-shabaab.
Madaxweyne Dowladda Soomaaliya Farmaajo oo maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safaro uu ku kala bixinayay dalal ay ka mid yihiin Kambala, Jabuuti & Itoobiya wuxuuna sheegay in uu soo dhaweyn iyo Taageero uu ka helay wadamadii uu booqday, wuxuuna sheegay in ay ka aqbaleen in ay kordhiyaan dadaalada dalalkooda ay kaga qayb qaadanayaan dagaalka lagaga xoraynayo Alshabaab guud ahaan dalka.
“Waxaan u safarnay sidii aan garab ugu heli lahayn dar-dar gelinta dagaalka aan dalka kaga xoraynayno Alshabaab, Alle waa nagu guuleeyey. Madaxdu waxa ay ballan qaadeen in ay ka jawaabaan codsigeenii ahaa in la xoojiyo ciidamadeenna oo qalab iyo agabka ay u baahanyihiin nagu gacansiiyaan,” ayuu yiri Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay u istaagaan la dagaalanka argagixisada Alshabaab ee had iyo jeer ku howllan xasuuqa iyo gumaadka umaddeena.
“Murugadii ka dhacday Soobe si aysan mar kale u soo noqon, waa in aan u wada istaagnaa difaaca dalkeenna, lana dagaallano cadawga si aysan fursad dambe ugu helin dhibaatada ay nagu hayaan,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Ugu dambeyn, Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku howllan qorsheyaal lagu dabargooynayo qatarta ururka Al-shabaab, isagoo safarkiisa ka hor xarunta ciidanka ee Jasiira ku saagootiyey Cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka oo u ambabaxayey howlgallo ka dhan ah argagixisada Al-shabaab.